कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन्छः पौडेल, हुँदैनः सुजाता
Wed, Feb 26, 2020 at 2:49am
बढ्दै बाँस्कोटाको मनोमानी, कार्यविधि मिचेर ९७ आइटी ल्याब स्थापना गर्न दबाब #आहा खबर# नेपाल ट्रस्टको १७२ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याइने #आहा खबर# नेपाल ट्रष्टको श्वेतपत्र : प्रचण्ड, देउवा, बाबुरामदेखि वामदेव र गच्छदारसम्म जोडिए #आहा खबर# अमेरिका र भारतबीच तीन अर्बको रक्षा सम्झौता #आहा खबर# संसदमा सरकारको चर्को आलोचना, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग #आहा खबर# इरानका स्वास्थ्यमन्त्री नै कोरोनाबाट संक्रमित #आहा खबर# एशिया -११ काे टाेलीमा सन्दीप लामिछाने पनि #आहा खबर# नेपाली क्रिकेट टोली बिहीबार थाइल्याण्ड जाँदै #आहा खबर# वामदेव प्रकरणले नेकपा नै विभाजित हुनसक्ने चेतावनी #आहा खबर# बाबुरामको चेतावनीः राजतन्त्र गयो, ओलीतन्त्र पनि जान्छ #आहा खबर# भौतिकमन्त्री नेम्वाङले सम्हाले सहरी विकास मन्त्रीको पदभार #आहा खबर# हङकङमा कोरोनाभाइरसका कारण ५७ हजार बेरोजगार बने #आहा खबर# सानेपा हत्याकाण्डको निष्कर्ष: जबर्जस्ती प्रयास भएको छैन, हत्याको कारण भने खुलेन #आहा खबर# विक्की कौशलको भूत हेर्दा कति डर लाग्छ ? #आहा खबर# मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना #आहा खबर#
बिहिवार, २६ फागुन २०७३,	आहाखबर	1.73K
पर्वतः नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तोकिएकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने दावी गरेका छन् । बिहीबार बिहान पर्वत कुश्माबजारमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले वैशाख ३१ गते निर्वाचन नहुने हो भने कुनै पनि तहको निर्वाचन गर्न नसकिने भन्दै यो निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुने बताए ।
उनले मिति घोषणासँगै सिंगो मुलुक चुनावमय बनेको बताउँदै अब किन र केका लागि रोक्न वा स्थगन गर्नुपर्ने ? भन्ने कारण नै नरहेको बताए । मधेसवादी दलहरुले भन्दैमा चुनाव स्थगन नहुने दाबी गरे ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतसहितको पार्टी बनाउनुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।
हतारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा सरकार अप्ठेरोमा परेको बताउँदै अब प्याकेजमा सहमति गरेर तोकिएको मितिभित्रै तीनै तहका चुनाव सम्पन्न हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सहमतिविना चुनाव हुँदैनः सुजाता
काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले राष्ट्रिय सहमतीबिना स्थानीय निर्वाचन सम्भव नभएको बताएकी छन् । भक्तपुरमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सबै दलको सहमति नभई घोषणा गरिएको निर्वाचन सम्भव नभएको बताइन ।
तीन दल मिल्नुको विकल्प नरहेको सुजाताको भनाई थियो । उनले सबै दल मिलेर चुनावमा जानुपर्ने भन्दै दलहरुबीचको मतभेदका कारण समस्या आएकाले राष्ट्र कमजोर भएको बताइन ।
दलहरुबीच बारम्बार झगडा गर्ने, समस्या ल्याउने गरेकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवी बिग्रिएको भन्दै सुजाताले सबैले धैर्यता गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताइन । उनले मधेसी मोर्चाको संविधान संशोधनको मागलाई कहीं कतै समावेश गर्न आवश्यक भए पनि पूर्णरुपमा सबै कुरा एकैचोटी संविधानमा समावेश गर्न नसकिने बताइन ।
मधेसी मोर्चाबिना निर्वाचन गए मधेस अशान्त हुने बताउँदै सुजाताले यसले रक्तपात हुने तर्क गरिन । मधेसी मोर्चालाई समेटेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने उनको तर्क छ । सप्तरी घटनाको मुख्य कारण सरकारको कमजोर सुरक्षा व्यवस्था भएको सुजाताको भनाई छ ।
सरकारको बच्चापनले यस्तो समस्या आएको भन्दै उनले कुनै पनि पार्टीले शान्तिपूर्ण सभा समारोह गर्न पाउने बताइन । एमालेका नेता कार्यकर्तालाई कांग्रेसका कार्यकर्ताले संरक्षण गरेर जोगाएको सुजाताको दावी थियो ।